Abafundi abathathu base-KZN bane-swine flu | News24
Abafundi abathathu base-KZN bane-swine flu
Durban - Abafundi abathathu baseClifton College, eThekwini, balulamela ekhaya kulandela ukuthola umkhuhlane oyingozi i-H1N1 ngempelasonto, kusho uthishanhloko wesikole ngoLwesine.
UBrian Mitchell ukuqinisekisile ukuthi abazali bazise lesi sikole esizimele esiseMorningside ukuthi lezi zingane aziphilile.
Umxhumanisi walesi sikole nabezindaba uJess Basson uthe abazali balezi zingane ezenza uGrade 3 bazise uthishanhloko ngempelasonto ende ukuthi lezi zingane zingenwe yilo mkhuhlane.
OLUNYE UDABA: ISwine flu isibulale umuntu ePoland
"Isikole sibe sesithumela ama-email kubona bonke abazali. Lezi zingane zibe sezigodukiswa futhi ngeke zikwazi ukubuyela esikoleni kuze kube zifika nezincwadi zikadokotela eziqinisekisayo ukuthi lo mkhuhlane usuphelile," kusho uBasson.
Esinye isikole, i-Ashton International College, esiseBallito, KwaZulu-Natal, naso sibe nezigameko ezintathu zalo mkhuhlane oyingozi.
Ulwazi oluhlinzekwe ku-website yoMnyango wezeMpilo luthi umkhuhlane i-H1N1 uthathelana ngokuthi onawo athimule noma akhwehlele bese kutheleleka abanye.